Aardwolf - Ezanyisayo - Mzantsi Afrika
I-Aardwolf [Proteles cristata]
Igama elithi Aardwolf lithetha 'imvu yomhlaba' ngesiBhulu kwaye ivela kwiimpawu zayo ezinjengeenja kunye nemikhuba yokutya izinambuzana ezaziwayo emhlabathini, zigrunjwa emhlabeni kwi ngxondorha.
I-Aardwolf inombala otyheli nantsundu, kunye nemigca emnyama emininzi, umsila omnyama, omde, nomsila emhlane, ophuma xa i-Aardwolf isengozini okanye isoyika. I-Aardwolf imile kwi-40-50 cm ukusuka emagxeni kunye nomsila ubude be-20-25 cm kunye nobude obuyi-65-80cm ukusuka empumlweni ukuya emsileni kwaye ubunzima buphakathi kwe-8 ukuya kwi-12 kg. Ifana ne-Hyena encinane.
Iintlobo yezingcali zeHyena zitya izinambuzana. Ngenxa yoko ulungele ukutya izinambuzana, amazinyo e-aardwolf, ngaphandle kweenjini zayo, ziye zancipha ezingenakukwazi ukufumana inyama. Amazinyo azo iwasebenzisela ukukhusela ummandla wayo kwezinye iAardwolves. Ukutya kwe-Aardwolf kuqulethe kwiintlobo ezimbini zezinambuzane, enye yazo iya kulala ngexesha lokubanda kwebusika, ngoko ke i-Aardwolf iya kutshintshela kwezinye iintlobo zokutya.
Ukutya okuncinci kuthetha ukuba i-Aardwolf inothintelo okuncinci ekutyeni. Ngobusuku obuqhelekileyo i-Aardwolf ingatya kuyo yonke indawo ukusuka ezi ngamabini anamakhulu amawaka ukuya kuma kwa Amathathu amakhulu amawaka. Ngokusebenzisa ukuphulaphula kwazo i-Aardwolf iyakwazi ukufumana izi nambuzana emhlabathini kwaye isebenzise ulwimi lwazo olubanzi, olunamathelisayo elukhuphayo. I-Aardwolf nayo iyaziwa ukuba itya nezinye izilwanyana ezifana neempuku, iintaka ezincinci, amaqanda kunye ne-carrion.
Ekubeni i-Aardwolf yendoda neyasetyhini zizodwa, zinentloni kwaye ayikho into eyaziwayo ngokuziphatha kwayo kwentlalo, kodwa kukholelwa ukuba ukuxhatshazwa kwenzeka ku nyaka wonke. Xazilinde uzala zihlala kwiintsuku ezingama-90-100 kunye ne-2 ukuya kwi-4 yamantshontsho. Xa lamntshontsho exunyiwe abazali bobabini bondla kwi zinambuzana esele zityiwe.
I-aardwolves zitshatyalazi zobusuku, ezi zodwa, ziza kunye kunye nomlingane nomntwana osemva. Ngamanye amaxesha kubonwa ngababini okanye ngamaqela amancinci. I-Aardwolf ayizange ivelise inkqubo yezintambo njengeehyenas ezibonakalayo kunye nemigqabha ngenxa yokutya kwazo ngokuthe ngqo. Ekubeni ukutya akukwazi ukwabelwana okanye kubuyiselwe kwideni, i-wardwolves kufuneka ihambe kwaye itye ngokwayo. Iimitha zabo zivame ukukhulisa i-springhare burrows, kodwa zihlala zichitha i-Aardvark okanye i-Porcupine burrows. Ii-aardwolves ziyagrumba kwaye nokungabikho kwemingxuma, baya kukwakha.
Zifumaneka kulo lonke elasempuma nakumazantsi eAfrika, ngaphandle kwezantsi ngaselunxwemeni. Ezi zithuthi ezifihlakeleyo kwaye ezingenabungozi zibonakala zinendawo enkulu yokunyamezela indawo yokukhetha ngokukhethekileyo kwiindawo ezinqamlekileyo, ezivulekileyo, iindawo zokungcebeleka kunye neendawo eziqingqiweyo apho zihlala khona. Kukho iindawo ezohlukeneyo zeendawo zeAardwolve, ezisezantsi eMzantsi Afrika kwaye enye isuka eTanzania enyakatho ukuya ngasezantsi kweYiputa. Iinqwelo zeeArdwolf zifumaneka kwiindawo eziqingqiweyo kunye nezihluma zaseBotswana, iKaroo kunye nePhondo leMntla Koloni.
7.7 - 13,5 kg
7.7- 13,5 kg
2 - 4 abatsha bazalwa nge nyanga yoMsintsi ukuyotsho kwinyanga yeTshampuzi emva kwexesha lokuthotyelwa kweenyanga ezi-2.
I-Aardwolf inamaconti ama-hlanu kwinqanaba langaphambili, kodwa inzwane yokuqala iphakamile kwaye ayibonakali kwi-spoor, kwaye ineezwane ezine ezinyaweni. Amacwecwe anqabile xa ebonwa ngasentla, kodwa ngombono ophezulu ocwangcisiweyo kwaye wakhelwe ngamandla, kwaye malunga ne-20 mm ubude phezu kwe khalo.